कलेज पढ्दै गर्दा दिपेशको दिमागमा फुरेको ‘थुप्रै’ जुक्ति, पुस्तक व्यापारलाई यसरी जोड्यो प्रविधिसँग – BikashNews
कलेज पढ्दै गर्दा दिपेशको दिमागमा फुरेको ‘थुप्रै’ जुक्ति, पुस्तक व्यापारलाई यसरी जोड्यो प्रविधिसँग
२०७७ पुष २८ गते १०:२५ नरेन्द्र रौले
काठमाडौं । पुस्तकको पारखी हुनुहुन्छ, तर पुस्तक पसलसम्म जान झन्झट लाग्छ ? यस्तो अवस्थामा बिना झन्झट तपाईंका रोजाईका पुस्तक हातैमा ल्याइदिने छ ‘थुप्रै’ ले । त्यो पनि एउटा फोनको घन्टी र एक क्लिकको भरमा ।
सन् २०१९ को फ्रेब्रुअरीबाट सञ्चालनमा इ–कमर्स वेवसाइट ‘थुप्रै’ ले पुस्तकसँगै इ–बुकको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । फोन, सामाजिक सञ्जाल र ‘थुप्रै’ को वेवसाइटका माध्यमबाट आफूलाई आवश्यक परेको किताब अर्डर गर्न सकिन्छ ।
‘थुप्रै’ को क्याट्लगमा नयाँ तथा पुराना गरेर ३ हजार पुस्तकको लिस्ट छ । त्यसमा २ हजार ५ सय अहिले उपलब्ध छन् । खुलेको २ वर्ष पुग्नै लाग्दा थुप्रै पाठकहरुको मन जित्दै ‘थुप्रैै’ फैलिदैछ । नेपालका कुना–काप्चादेखि विदेशमा रहेका नेपाली पाठकहरुलाई इ–बुकको सेवा दिदै आएको छ । ‘थुप्रैै’ को एप्स आइओएस र एन्ड्रोइड गरेर दुबै अहिलेसम्म ४० हजार बढी डाउनलोड भइकेको छ ।
इ–कमर्स वेवसाइट ‘थुप्रैै’ को कथा रोचक छ ।
भनिमण्डल, ललितपुरका दीपेश आचार्य कलेज पढ्दा कोर्ष बाहिरका पुस्तक पढ्नमा रुची राख्थे । विशेषगरी नन्–फिक्सनमा रुची राख्ने दिपेशले चाहेकै बेला पुस्तक किन्न पाउ“दैनथे ।
बजार जाँदा मोटरसाइकल पार्किङ नपाएर अर्को समस्या झेल्नुपथ्र्यो । उनले यसको विकल्पबारे सोच्न थाले । त्यो बेला नगन्य मात्रामा इ–कमर्स साइट थिए । भएकाहरुले पनि अंग्रेजी पुस्तक मात्रै डेलिभरी गर्थे ।
हरेक समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई दिपेशले व्यवहारमै उतारिदिए । आफूले भोगेको समस्या अरूले भोग्न नपरोस् भन्ने उनको चाहना त छँदै थियो, सँगै यो क्षेत्रमा व्यापार पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर उनी अर्काे खोजीमा लागेका थिए ।
दिपेशको त्यो कदममा कलेजकै साथी खोले सिमल, चितवनका राजु गोतामले साथ दिए । दीपेश र राजुको चिनजान बालकुमारीस्थित एनसीआईटी कलेजमा पढ्दा भएको थियो । सन् २००८ मा भेटिएका दुई साथी पछि गएर व्यापारिक साझेदार बन्न पुगे ।
‘हाम्रो कुरा मिल्थ्यो, सफ्टवेयर र संगीतमा दुबैको रुची उस्तै, दुबै जना फुटबल खेल्ने, हेर्ने गथ्र्यौं, त्यो बेला हाम्रो रुची नमिलेको भए यहाँसम्म आइपुगिदैनथ्यो,’ राजुले सम्झिए ।
पाल्पामा जन्मिएका, भैरहवामा हुर्किएका र कलेज जीवन काठमाडौंमा बिताएका दीपेश र चितवनका राजु कम्प्युटर, प्रोडक्टमा रुची राख्छन् । नेपालमै त्यो पनि सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमै अझ प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा काम गर्ने चाहना थियो दुबैको ।
आफ्नो सपना पूरा गर्न उनीहरुले सन् २०१३ मा एउटा कम्पनी खोले । अकोर्ड सोलुसन्स नामको त्यो कम्पनीमा सुरुमा दिपेश एक्लै थिए । पछि कलेजका साथी अमूल्य आचार्यसँगै राजु पनि जोडिए । क्रमशः १५ जना स्टाफ पुगे । त्यहीबीच दिपेशको मनमा पुस्तकको व्यापार गर्ने सोच आयो । छोटो र सजिलो नाम खोज्दै जाँदा नाम जुऱ्यो, ‘थुप्रैै’ । जुन थुप्रै सोलुसन्स प्राली अन्तरगत सञ्चालन हुने गर्छ ।
पहिल्यै कम्पनी खोलिसकेकोले सबै कुराको सेटअप छदैं थियो । नयाँ सामानहरु किन्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । देश, विदेशमा कसले कसरी अनलाइनबाटै पुस्तकको व्यापार गरिरहेका छन् ? सफल र असफल दुबै खाले उदाहरणबारे प्रशस्त अध्ययन, अनुसन्धान गरे ।
‘सफल कथाले पाठ सिकाउँछ, असफल कथाले त्यो बाटोमा नजाऔं भन्ने ज्ञान दिन्छ,’ राजुले सम्झिए ।
सुरुमा थुप्रैमा १० लाख रुपैंयाँको लगानी भएको थियो ।
अहिले वेबसाइट, एप्स, अडियो, इ–बुक, डेभिलरी एप्स निमार्णको खर्च जोडेर ५० लाख रुपैंयाँ लगानी पुगिसकेको छ । यसैका लागि मात्र स्टाफको संख्या पनि ८ पुगिसकेको छ । काठमाडौंको बुद्धनगरमा कार्यालय राखेर सुरु भएको थियो थुप्रै ।
‘सुरु सुरुमा त दुबै जना पुस्तक डेलिभरीमा पनि हिड्यौं, हामीसँग सिमित स्रोत साधन थियो, स्टाफले नभ्याउँदा आफै पनि डेलिभरीमा गयौं,’ लजालु, कम बोल्ने स्वभावका राजुले सुनाए ।
थुप्रैले ब्राण्ड स्थापित गर्नका लागि सांगितिक कार्यक्रम, नाटक र कन्सर्टका लागि इ–टिकेट पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
‘अहिले त नामै नसुनिएका पुस्तकहरुको पनि अर्डर आउँछ, जुन प्रकाशन हुनै छाडेका हुन्छन्,’ दिपेशले भने ।
नयाँ ग्राहक बनाउँन र कम्पनी चलाउन सुरुमा निकै छुट पनि दिए उनीहरुले । डेलिभरी गर्ने एक जना स्टाफ भएकोले सबैतिर पुग्न गा¥हो थियो । सोसल मिडियामा प्रशस्त मार्केटिङ गरियो । यो व्यवसायमा उनीहरु रमाउदै गए ।
सञ्चालक दीपेशका अनुसार सोसल मिडियाबाट, (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम) फोन, वेवसाइट र मोबाइल एप्सबाट अहिले दैनिक रुपमा झण्डै ३० वटा अर्डर आउने गरेको छ । लकडाउनमा इ–बुक पनि राम्रो अर्डर आयो । एप्समै पढ्न मिल्ने इ–बुक डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ । तर, अरुलाई पठाउन मिल्दैन । यो हार्डकपी भन्दा सस्तो पनि हुन्छ ।
पुस्तकको सबैभन्दा राम्रो कारोबार हुने समय भनेको दशैं अगाडीको समय हो । यसपाली भदौ, अशोजमा मात्रै ३ सय किताब बेचेको सह–सञ्चालक राजुले बताए । उनका अनुसार लकडाउनमा पनि पुस्तकको राम्रो कारोबार भयो ।
‘थुप्रैै’ को मासिक कारोबार कति हुन्छ ? ‘हाम्रो कारोबार एकाउन्टिङ सफ्ट्वेयरमै हुन्छ । दुबै कम्पनीको यति नै भनेर हिसाब गरिएको छैन,’ दीपेशले ‘व्यवसायिक’ जवाफ फर्काए ।
अब अडियो बुकमा पनि
थुप्रै सोलुसन्सले अब पुस्तकहरु अडियो भर्सनमा पनि उपलब्ध गराउने छ । पढ्नभन्दा सुन्नमा रुचि राख्नेका लागि अडियो भर्सन ल्याउन लागिएको हो ।
‘गत डिसेम्बरमै रिलिज गर्ने योजना थियो, अब आधिकारिक रुपमा हामी यो काम गर्छौं,’ दिपेशले योजना सुनाए ।
सुरुवातमा २० वटा जति चर्चित र लोकप्रिय किताब अडियो किताबका रुपमा उलब्ध हुनेछन् । एप्समा एउटा बेग्लै सेक्सन हुनेछ जहाँ फिजिकल, इ–बुक र अडियो बुक उपलब्ध हुनेछ । केही अघि सुजिव शाक्यको अर्थात परिवर्तन किताब इ–बुक र अडियो पनि उपलब्ध गराएको थियो । लेखकले नै वाचन गरेका अडियो बुकमा उपलब्ध छ ।
कम्पनीले इ–बुकमा उपलब्ध किताबलाई नै अडियो बुकमा लैजाने तयारी गरेको छ । यसमा नेपालय, सांग्रिला प्रकाशन, कथालय, किताब पब्लिसर्स जस्ता प्रकाशन गृहका धेरै किताबहरु छन् ।